ပျော့ပျောင်းသောတံဆိပျကိုတံခါးဝအဆို့ရှင်များအတွက်စံ China Manufacturer
ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏ Size ကို,ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏ installation,ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏ Size ကို,ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏ installation,ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု valve > soft အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve > ပျော့ပျောင်းသောတံဆိပျကိုတံခါးဝအဆို့ရှင်များအတွက်စံ
1, အဆို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ပစ္စည်းသံ, ချပစ်သံမဏိ, သံမဏိ, 316L န့်ပစ်နှင့်တန်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုစမ်းသပ်မှုဒေတာအထိမ်းအမှတ်နှင့်သံချပစ်ရပါမည်။
2, ပစ္စည်းရပ်တ, သံမဏိကို stem (2CR13), ကြီး caliber အဆို့ရှင်လည်းအထုပ်ကို stem embedded သံမဏိဖြစ်သင့်သည်။
3 အရ, ခွံမာသီးပစ္စည်းသွန်းလူမီနီယံကြေးဝါကဲ့သို့၎င်းသို့မဟုတ်သွန်းလူမီနီယံကြေးဝါကို လုပ်. , နှင့်ခိုင်မာသောနှငျ့ခှနျအားပင်စည်၏ထက် သာ. ကြီးမြတ်များမှာဖြစ်ပါတယ်။
4, အဆို့ရှင်ဘုရ်ှကပစ္စည်းများ၏ခိုင်မာသောနှငျ့ခှနျအားပင်စည်၏ထက် သာ. ကြီးမြတ်မဖြစ်သင့်နှင့်ရေနှစ်မြှုပ်ခြင်း၏အခြေအနေအောက်ရှိအဆို့ရှင်ကို stem နှင့်အဆို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူလြှပျစစျချေးဖွဲ့စည်းရန်မည်မဟုတ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏ Size ကို , ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏ installation , ဆော့ဖအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု , Lock ကိုခက်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve , non-Rising ပင်မဖျအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve , soft အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve စီးရီး , hard အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve , soft အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဂိတ် Valve Dn100